Transcend StoreJet 200 Dib u Eegid: Xarakaadka iyo Xawaaraha Mac | Waxaan ka socdaa mac
Transcend StoreJet 200 dib u eegis: qaadista iyo xawaaraha Mac-gaaga
Ka mid noqoshada saxannada SSD ee laptop-ka Apple waxay ahayd boodbood tayo leh oo muhiim ah, maahan oo keliya in la yareyn karo dhumucdiisa iyo culeyskiisa, laakiin sidoo kale xawaaraha qalabka, aad ayey uga sarreysaa heerarka wareejinta sare ee noocan ah keydinta.
Peso sidoo kale waxay meteshay qiimo koror aad u badan, taas oo ku qasbeysa isticmaalaha inuu ka fiirsado inta boos ee keydinta ay u baahan yihiin maxaa yeelay waxaa lagu bixiyaa qiimaha dahabka. Beddelka ay inbadan oo naga mid ahi u jeestaan ​​waa disk banaanka ah, maantana waxaan ku lafa guraynaa ikhtiyaar xiiso leh Transcend, disk-ka StoreJet 200 oo na siisa ugu badnaan xawaare sare leh 2TB oo kaydinta ah.
2 Ka gudub Software-ka Elite
Wax yar ayaa loo dhihi karaa naqshad sida fudud laakiin xarrago leh sida tan Transcend's StoreJet 200. Ma noqon karto mid ku habboon in lala socdo MacBook-keena ama MacBook Pro, oo leh qaab-dhismeedka aluminium iyo dhumucdiisuna ay yar tahay. Kaliya laydh iftiimaya marka uu shaqeynayo iyo isku xiraha USB-C ee dhinac ka mid ah ayaa jabiya birtan yar ka yar oo ka khafiifsan ku dhowaad nooc kasta oo taleefannada casriga ah oo suuqa yaalla, aadna uga fudud oo kaliya 133 garaam. Saldhigga diskiga la qaadan karo wuxuu ka sameysan yahay balaastik madow si uusan u waxyeeleynin dusha aad saarto.
Faa'iidada kale ee noocan ah diskiga ah ayaa ah iyaga oo aan u baahnayn awood koronto oo dheeri ah oo laga helo kombiyuutarka aad ku xirto. Uma baahnid inaad ku dalacdo adabtarada xoogga. kaliya diskigaaga la qaadan karo iyo fiilada yar ee USB-C ee ay ku jirto. Faahfaahinta soo saaruhu waa inay ku darayso USB-C illaa USB-C iyo USB-A kale oo USB-C ah markaa waxaad ku xiri kartaa kumbuyuutar kasta oo suuqa yaalla adigoon iibsan fiilooyin dheeri ah. Waxay yihiin fiilooyin u hoggaansamaya qeexitaanka USB-C 3.1 Gen 1, sidaa darteed waxay bixiyaan xawaare gaaraya 5Gbps.
Yeynaan ku kadsoomin cabirka Dukaankan yar eeJet 200 maxaa yeelay wuxuu leeyahay 2TB awood ah. Gudaha waxaa ku jira 2,5 houses disk oo leh HFS + qaab iyo xawaaraha wareejinta xogta, sida laga soo xigtay soo saaraha, ee 135MB / s akhris iyo qoraal labadaba. Imtixaanadii aan qaadnay, oo aan ku xisaabtamnay in cabirka noocan ah ay si weyn u saameynayso qalabka aad isticmaasho iyo dalabka loo doortay in la sameeyo, xawaaraha aan helnay waxay aad ugu dhowyihiin waxa soosaaruhu qeexayo.
Ka gudub Software-ka Elite
Qalabkaan la qaadan karo waxaa weheliya a softiweer bilaash ah oo aad ku samayn karto nuqulo nuqul ah faylashaada, soo celin karo nuquladaas, iskula dubbarido faylalka iyo xitaa nuqul ka sameysashada adeegga kaydinta daruurta sida Dropbox ama Google Drive.
Haddii aad rabto inaad u isticmaasho diskkaan la qaadan karo si aad u kaydiso ama u isku xirto faylasha, ma heli doontid beddel ka fiican ama ka dhakhso badan isticmaalka aaladda softiweerka ah ee la socota. Iskuxirkiisu waa mid fudud oo dhawr talaabo ayaad awoodi doontaa inaad fuliso shaqooyinkan adigoon u baahnayn inaad adeegsato barnaamij saddexaad.
Gawaaridaan Transcend StoreJet 200 waa bedel aad u fiican oo lagu ballaariyo booska keydka laptop-kaaga. Cabbir aad u yar oo aad u fudud ayaad ku qaadan kartaa meel kasta oo jeeb kasta oo boorsadaada ah ama shandad ku xigta laptop-kaaga. In kasta oo cabbirkaasi jiro, haddana kama quusanno awoodda, maaddaama ay 2TB keydkeedu kuugu filnaan doono inaad kaydiso mid ka mid ah shaqadaada, iyadoo xawaare degdeg ah lagu kala wareejinayo iyada oo la tixgelinayo in aan wajaheyno 2,5 ″ disk caadi ah. Waa ikhtiyaar ku habboon kuwa wax badan ka shaqeeya laptop-kooda laakiin u baahan kayd aad u badan si ay ula tacaalaan faylasha waaweyn, kuwaas oo ay sidoo kale ugu baahan yihiin xawaare sare xawaareyn. Qiimaheedu waa € 130 on Amazon (isku xirka), taas oo ah mid aad u adag haddii aan tixgelinno qaabeynteeda, waxqabadkeeda iyo awooddeeda.
Ka wareeji DukaanJet 200
Naqshadeynta iyo qalabka Premium
Cabbir yar iyo iftiin
USB-C 3.1 Gen 1 oo leh illaa 135MB / s xawaare
Waxaa ku jira laba USB-C iyo USB-C oo ah fiilooyinka USB-A
Waxaan u xiisay shandad qaad
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Transcend StoreJet 200 dib u eegis: qaadista iyo xawaaraha Mac-gaaga
Software-ka lagu dayactirayo Mac-da 'T2 chip' ayaa hadda ku jira heegan
Apple Pay waxay imaaneysaa Sacuudi Carabiya